mesolimbic စနစ်အတွင်းအသစ်အဆန်းနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲများကိုအကြားဆက်စပ်အပြန်အလှန် (2012) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
အဆိုပါ mesolimbic စနစ် (2012) အတွင်းအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အကြား Contextual အပြန်အလှန်
Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2012 ဇွန်; 33 (6): 1309-1324 ။
2011 ဧပြီ 21 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1002 / hbm.21288
Nico Bunzeck,*,1 ခရစ်ယာန်က F Doeller,2,3,4 ray J ကို Dolan,5 နှင့် Emrah Duzel2,6
ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များအတွက် Medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (MTL) မှီခိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ကိုလည်းဆုချခြင်းနှင့် ventral striatum လည်းပါဝင်သည်, dopaminergic midbrain နှင့် orbitofrontal cortex (mOFC) medial မှတုံ့ပြန်တဲ့ circuitry အားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်အဆန်းဆုလာဘ်များအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ရှာဖွေရေးလှုံ့ဆျောမထွက်ရဒါကဘုံအာရုံကြောကွန်ယက်ကိုအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားတစ်ဦး functional ဖြစ်စေ link ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ, link တစ်ခုကိုလည်းအသစ်အဆန်းချေါ "တူးဖော်ရေးဆုကြေးငွေ။ " ကျနော်တို့ကအသစ်အဆန်းအကြားအပြန်အလှန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်တစ်ဦးတူးဖော်ရေးဆုကြေးငွေကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့အာရုံကြောအချက်ပြပေါ်မှာအာရုံနှင့်အတူဆုချမယ့်မြင်ကွင်း encoding ကပါရာဒိုင်းအတွက် fMRI ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ (24 နာရီပြီးနောက်) မြင်ကွင်းများဘို့မျှော်မှန်းထားသည်, ဆုလာဘ် related ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အဖြစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန် MTL, ventral striatum နှင့် substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ (SN / VTA) ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ထို့ပြင် hippocampus အသစ်အဆန်းတစ်ခုအဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်, အ striatum ဆုလာဘ်တစ်ခုအဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်, နှင့် mOFC အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံးအချက်ပြ။ တစ်ဦးတူးဖော်ရေးဆုကြေးငွေကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အဆိုပါ hippocampus အတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာ MTL အသစ်အဆန်းအချက်ပြမှုများ striatal ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှု biases သော mOFC အတွက်မိမိတို့အကျိုးကို-ခန့်မှန်းဂုဏ်သတ္တိများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အတူတကွ SN / VTA အတူ striatum ထို့နောက် hippocampus အတွက် MTL-မှီခိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်တူးဖော်ရေးဆုကြေးငွေအချက်ပြမှုများကိုထိန်းညှိ။
keywords: အသစ်အဆန်း, ဆုလာဘ်, mesolimbic စနစ်, မှတ်ဉာဏ်, hippocampus, substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ, ventral striatum, mOFC, တူးဖော်ရေးဆုကြေးငွေ
အသစ်အဆန်း, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်တဲ့ motivationally အဓိကသင်ယူမှု signal ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်မှတ်ဉာဏ် encoding ကအားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ [Knight ဟာကိုအထူးပြု1996; Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; Mesulam, 1998; Sokolov, 1963] ။ လူ့နှင့် nonhuman မျောက်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်မကြာသေးမှီကသက်သေအထောက်အထား, အသစ်အဆန်းများစိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆုလာဘ် [Bunzeck နှင့် Duzel နှင့်အတူ၎င်း၏ shared ဂုဏ်သတ္တိများဆက်စပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက် 2006; Kakade နှင့်ဒါယန်း, 2002; Mesulam, 1998] ။ ဤသည်မှာအကြံပြုချက်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက် midbrain ၏ substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ (SN / VTA) ဆုလာဘ်အဖြစ် [Ljungberg, et al ဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကနေအောက်ပါအတိုင်း။ 1992]; ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှု [Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, များအတွက် 2005] ။ အလားတူပင်လူ့ SN / VTA, ဆုလာဘ် [Knutson နှင့် Cooper ကအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံး activated ဖြစ်ပါတယ် 2005] နှင့်အသစ်အဆန်း [Bunzeck နှင့် Duzel, 2006; et al Bunzeck ။ 2007; et al Wittmann ။ 2005] အဖြစ်၎င်းတို့၏ဖြစ်ပျက်မှု [Knutson နှင့် Cooper ကခန့်မှန်းတွေကိုအသုံးပြုပုံ 2005; O'Doherty, et al ။ 2002; et al Wittmann ။ 2005, 2007] ။ အဆိုပါ SN / VTA အတွက်ထုတ်လုပ်သော neurotransmitter dopamine အလှနျ, Berridge [အပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ကိုထိန်းညှိ 2007; et al တို့သည်။ 2007].
ထို့ပြင် hippocampus, ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များအတွက်ရေရှည် Episode အမှတ်တရများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အရေးပါအရာတစ်ဦး medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (MTL) ဖွဲ့စည်းပုံ, ကိုလည်း Devenport et al [သင်ယူခြင်းဆုလာဘ်ပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်း။ ဆုံသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်1981; et al Holscher ။ 2003; et al Ploghaus ။ 2000; et al Purves ။ 1995; Rolls နှင့် Xiang, 2005; et al ရှောလမုန်သည်။ 1986; et al Tabuchi ။ 2000; Weiner, 2003; et al Wirth ။ 2009] ။ ဥပမာ, ကြွက် hippocampus baited ပေမယ် unbaited မဟုတ်ဝင်္လက်နက် [Holscher, et al အတွက်တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသထားတယ်။ 2003]; ကရာအရပျဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူခြင်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ် nonhuman မျောက်ဝံများ [Rolls နှင့် Xiang အတွက် 2005]; hippocampal လှုပ်ရှားမှု et al လူသားတွေအတွက်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်ယူခန့်မှန်းအမှား [Ploghaus, အောက်ပါအတိုင်း။ 2000]; နှင့်ဆုလာဘ် hippocampus နှင့်နျူကလိယအကြားထပ်တူအာရုံခံ [Tabuchi, et al accumbens တိုးပွားစေပါသည်။ 2000].
ဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်း၏ဆိုးကျိုးများအတွက်ဘုံ, အသစ်အဆန်းလုပ်ရပ်များဆုလာဘ် [Kakade နှင့်ဒါယန်းရိတ်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်၏တူးဖော်ရေးလှုံ့ဆျောတဲ့အကြံပြုချက်အားဖြင့်သီအိုရီအ ပြန်. နိုင်ပါသည်2002] ။ ဒီအကြံပြုချက်အရ, အသစ်အဆန်းတစ်ခု key ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးပိုင်ဆိုင်မှုဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်၎င်း၏အလားအလာဖြစ်ပါသည်, အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုသော်လည်း, ဆုလာဘ်၏မရှိခြင်းအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲသည်မှန်လျှင်, တဖြည်းဖြည်းဒီအလားအလာချွတ်။ အဆိုပါရှာဖွေရေးဆုကြေးငွေအယူအဆဟောကိန်းများနှစ်မျိုးစေသည်: ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းဝတ္ထုသို့မဟုတ်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်း၏ status ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးတစ်စက္ကန့်တဦးတည်းကိုအခြားလှုံ့ဆော်မှုပေါ်မှာဤအရေးပေါ်၏ဆက်စပ်အခြေအနေဝေးလံသောဆိုးကျိုးများမှပြောပြတယ်ရာနှင့်အတူအာနိသင်မှပြောပြတယ်။ ပထမဦးဆုံးခန့်မှန်းအညီ, ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခြင်းဥပမာ Wittmann, et al [တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်နှိုးဆွဖြစ်ခြင်းထက်ဆုလာဘ်တစ်ခုထက်ပိုအစွမ်းထက်ခန့်မှန်းဖြစ်သင့်သည်။ 2008] ။ အဲဒီဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းအခါ, ဆုလာဘ်မျှော်မှန်းအကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်သင့်သည်။ ဒုတိယ ( ပို. သွယ်ဝိုက်) ခန့်မှန်းရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်အပြုအမူအပေါ်အသစ်အဆန်း၏ motivationally တိုးမြှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတူညီသောအခြေအနေတွင်လက်ရှိများမှာအခြားလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုအပေါ်တစ်ဦးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီအကြံပြုချက်, Bunzeck နှင့် Duzel နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ [ 2006] ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောတစ်ဦးအခြေအနေတွင်အတွက်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှု MTL အဆောက်အဦများအတွက်လျော့နည်းအထပ်ထပ်ဖိနှိပ်မှုပြသသောပြသခဲ့သည်။ ဤသည်ပင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆုလာဘ်၏မရှိခြင်းအတွက်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောတစ်ဦးအခြေအနေတွင်လည်းဤအခြေအနေ၌အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှု [Bunzeck နှင့် Duzel စူးစမ်းလေ့လာမယ့်ပိုမိုအားကောင်းလှုံ့ဆျောမှုရှိကြောင်းအကြံပြု 2006] ။ သို့သော်ယနေ့အထိ, အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ဤအဟောကိန်းများကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ပြီးကြပြီမဟုတ်။ စမ်းသပ်ဆဲအသုံးအနှုန်းများ, ဒီပေးထားသောအခြေအနေတွင်ဆုလာဘ်ဝတ္ထုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်းခန့်မှန်းကြသည်ထိုကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်း၏အကျိုးကို-ခန့်မှန်းပိုင်ဆိုင်မှုကြိုးကိုင်လိုအပ်သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့အနေနဲ့ fMRI လေ့လာမှုအတွက်အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့အပြန်အလှန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဤစမ်းသပ်ချဉ်းကပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့အပြန်အလှန်နားလည်ခြင်းဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ရေရှည် plasticity စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မည်သို့နားလည်လေးနက်တဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဇီဝကမ္မသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ် dopamine အဆိုပါ SN / VTA ကနေ, အပြုအမူများစိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ကိုထိန်းညှိပေမယ့် hippocampal plasticity [Frey နှင့်မောရစ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ဘို့အရေးကြီးသည်သာကွောငျးဖျောပွသ1998; လီ, et al ။ 2003] နှင့် hippocampus-dependant memory စုစည်းမှု [O'Carroll, et al ။ 2006] ။ ဒါခေါ် hippocampus-VTA ကွင်းဆက်မော်ဒယ် [Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, အလိုအရ 2005] အသစ်အဆန်းအချက်ပြမှုများအဆိုပါ hippocampus အတွက်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral pallidum မှတဆင့် SN / VTA မှပါးနေကြသည် [Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005] ။ စံပြပု SN / VTA ထံမှ dopamine modulate မှတံခါးသော့ကိုသိမြင် signal ကိုအဖြစ်အသစ်အဆန်းသူ့ဟာသူအလေးပေးသော်လည်းကိုလည်းအတိအလင်းစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များဟာ hippocampus နှင့် SN / VTA ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အသစ်အဆန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိန်းညှိဘယ်လိုမေးစရာများရှိနေပါသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်တဲ့အပြန်အလှန်အကြားမျှဝေဂုဏ်သတ္တိများ၏စီး မှနေ. ဤမေးခွန်းကိုချဉ်းကပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
စပါးရိတ်ရာကာလဆုလာဘ် [Bunzeck နှင့် Duzel မှရှာဖွေရေးလှုံ့ဆျောတဲ့ signal ကိုအဖြစ်ပါလျှင်အသစ်အဆန်းလုပ်ရပ်များ,2006; Kakade နှင့်ဒါယန်း, 2002; et al Wittmann ။ 2008] သ hippocampus-SN / VTA ကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းသာဖြစ်ခြင်းဝတ္ထုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းဆုလာဘ်ဟောကိန်းထုတ်ဘယ်မှာအခြေအနေတွင်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းသော်လည်းမရာအခြေအနေတွင်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဦးစားပေးတုံ့ပြန်မှုကိုပြသသင့်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဖြစ်ခြင်းဝတ္ထုဆုခခြံသောအခါရှာဖွေရေး၏တိုးမြှင့်သည်ဤဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမဟုတ်ဘူးသော်လည်း, တူညီတဲ့အခြေအနေတွင်တင်ပြကြသည်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုမှ hippocampal တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်သင့်ပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းဒါပေမယ့်ဝတ္ထုဆုလာဘ်ခန့်မှန်းထားသည်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက်အခြေအနေတွင်အတွက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့လျော့နည်း Contextual လှုံ့ဆျောမှုရှိသင့်ပါတယ်အကျိုးဆက် hippocampal လှုပ်ရှားမှုတ္ထုနှင့်စကားစပ်အတွက်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအနိမ့်ဖြစ်သင့်သည်။ ထို့ကွောငျ့အအသစ်အဆန်းဆုလာဘ်များအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက် Explorer အပြုအမူလှုံ့ဆော်ဖို့အခ်ါပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်သောအယူအဆလှုံ့ဆော်မှုများ၏ novelty- နှင့်ဆုလာဘ် status ကိုအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်များ၏ခန့်မှန်းစေပါတယ်။ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းဆုလာဘ်ခန့်မှန်းရသောအခါဖြစ်ခြင်းဝတ္ထုဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှကိုအားနည်းစွာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းထားသည်အခါညီ, အ hippocampus ဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ခြေအချက်အလက်များ၏အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်-status ကိုလွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေအဆိုအရ, အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားအဘယ်သူမျှမအလုပ်လုပ်တဲ့အပြန်အလှန်ရှိသင့်ပါတယ်။ တစ်နည်းမှာ hippocampus-SN / VTA ကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းသာအသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးအကြားမျှအပြန်အလှန်တစ်ဦးအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
အတူတူယူ, အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်အကြားအရေးပေါ်ကြိုးကိုင်သည့် mesolimbic သည့်စနစ်အတွင်းအသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုကိုမောင်းသောသော့ခယန္တယားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ ကြောင်းအဆုံးမှကျနော်တို့ et al, Bunzeck [ငွေကြေးဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိမြင်ကွင်းများ၏ပုံရိပ်များ၏အသစ်အဆန်း status ကိုအပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်ရှိရာတစ်ဦးပါရာဒိုင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။2009] ။ ထို့ကြောင့် (နည်းလမ်းများကိုကြည့်ပါ) မှန်ကန်သောဆုလာဘ် preference ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချမှန်ကန်စွာဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြီးနောက်မှသာဖြစ်နိုင်ပါခဲ့ပါတယ်။ အရေးကြီးတာကကျနော်တို့တနေ့ encoding ကအပြီးအသိအမှတ်ပြုမှတ်ဉာဏ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အရှင် hippocampal-SN / VTA ကွင်းဆက်ဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၏အကျိုးကို-ဆက်စပ်တိုးမြှင့်နှင့်အတူပတျသကျမယ်လို့အဘယ်သို့အတိုင်းအတာအစိတ်အပိုင်းများကိုမှခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
နှစ်ဦးအားစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု (စမ်းသပ်မှု 1) တစ်ဦးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုခဲ့ပေမယ့်ဒုတိယစမ်းသပ်ချက် (စမ်းသပ်မှု 2) အပြုအမူဆိုင်ရာအစီအမံများနှင့် fMRI ပါဝင်ပတ်သက်။
စမ်းသပ်မှု ၁ တွင်အရွယ်ရောက်သူ ၁၇ ဦး (အမျိုးသမီး ၁၃ ဦး နှင့်အထီးလေးယောက်၊ အသက် - ၁၉ နှစ်မှ ၃၃ နှစ်၊ အလယ်အလတ် ၂၃.၁၊ SD = ၄.၇၃ နှစ်) နှင့်အရွယ်ရောက်သူ ၁၄ ဦး သည်ပါ ၀ င်မှု ၂ - အမျိုးသား၊ ; ပျမ်းမျှ = 1 နှစ်; SD က = 17 နှစ်) ။ အားလုံးဘာသာရပ်များသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးပုံမှန်သို့မဟုတ်တည့်မတ်မှသာပုံမှန်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှအာရုံကြောဆိုင်ရာ၊ စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာရောဂါသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြmedicalနာများသို့မဟုတ်လက်ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုတင်ပြခြင်းမရှိပေ။ စမ်းသပ်မှုများအားလုံးကိုဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏စာဖြင့်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးဒေသခံကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက် (University College London, UK) အရသိရသည်။
စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းနှင့် Task ကို
နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက် (1) (2) ကနောက်တော်သို့လိုက်တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းအဆင့်သုံးစုံတစ်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီး preference ကိုတရားသဖြင့်စီရင်တာဝန်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါ။ ဤတွင်အသစ်ပုံရိပ်တွေ 120 ဝတ္ထုနှင့်လုံးဝကိုအသုံးပြုထားကြောင်း 120 အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်တွေထဲမှာရရှိလာတဲ့အသီးအသီးအစုံအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 1 ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်နှင့်စမ်းသပ်မှု2တစ်ခု MRI စကင်နာအတွင်းပိုင်းဖျော်ဖြေခဲ့စမ်းသပ်မှု မှလွဲ. နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်များအတွက်တူညီခဲ့ကြသည်။ (3) နေ့ရက်တွင်အားလုံးပေးအပ်ပုံရိပ်တွေနှစ်ခုအသိအမှတ်ပြုမှုအမှတ်တရများကို "ကိုသိ / သတိရ" လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
(1) အကျွမ်းတဝင်: ဘာသာရပ်များပိုင်းတွင် 40 ပုံရိပ်တွေ (20 မိုးလုံလေလုံနှင့် 20 ပြင်ပပုံရိပ်တွေ) ၏သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ familiarized ခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးချင်းစီရုပ်ပုံ 1.5 s နှင့်ဘာသာရပ်များတစ်ခု interstimulus ကြားကာလ (ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI) နဲ့3s အတွက်ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်နှစ်ကြိမ်တင်ဆက်ခဲ့သည်ကိုသူတို့လက်ျာလက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကိုအသုံးပြုပြီးပြင်ပ / မိုးလုံလေလုံ status ကိုညွှန်ပြ။ (2) အသိအမှတ်ပြုမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်: နောက်ပိုင်းတွင်, ဘာသာရပ်များတစ်9မိနစ်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီး preference ကိုတရားသဖြင့်စီရင်တာဝန် (session တစ်ခု) ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဤအပိုငျး (session တစ်ခု) နောက်ထပ် ( "အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်များ" အဖြစ်ရည်ညွှန်း) ကရင်းနှီးကျွမ်းအဆင့်တစ်ခုချင်းစီမှ 20 ပုံရိပ်တွေင်နှစ်ဦးကိုလုပ်ကွက်သို့ခွဲခြားနှင့် 20 ယခင်က "ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေ" အဖြစ်ရည်ညွှန်း (ပုံတင်ဆက်မခံ, ဘာသာရပ်များအကြား 20 s အတွက်ခေတ္တရပ်တန့်ပြီးနိုင် လုပ်ကွက်) ။ မဆိုပေးထားသောလုပ်ကွက်များတွင်ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေဖြစ်စေ CS- သို့မဟုတ်အပြန်အလှန် (အဖြစ် CS + နှင့်အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်များအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်Fig..1) ။ သင်တန်းသားများကိုအသစ်အဆန်းအခြေအနေနှင့်အားဖြည့်တန်ဖိုးကိုအကြားအရေးပေါ်ပေါ် မူတည်. "ကျွန်မပိုနှစ်သက်ကြဘူး" "ငါကြိုက်တတ်တဲ့" သို့မဟုတ်ညွှန်ပြနေတဲ့ Two-ရွေးချယ်မှု button ကိုစာနယ်ဇင်းကနေတဆင့်ချင်းစီပုံရိပ်တစ်ခု "preference ကို" တရားသဖြင့်စီရင်စေရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာက, "ပိုမိုနှစ်သက်" နှင့် "-ပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိ" ဟူသောဝေါဟာရကိုမဟုတ်ဘဲပုံ၏ဗေဒဂုဏ်သတ္တိများထက်ပုံရိပ် (ထို Contextual အရေးပေါ်ပေါ် မူတည်. ) ၏အဆင့်အတန်းကိုခန့်မှန်းအကျိုးကိုရည်ညွှန်းသည်။
အဆိုပါအရေးပေါ်ဤနေရာတွင် (ကြိုတင် "ပိုမိုနှစ်သက်လျှင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းများအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်" (ရသောအမှုဝတ္ထုပုံရိပ်တွေအတွက် CS + နှင့် CS- အဖြစ်အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်များအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်) သို့မဟုတ် "ပိုမိုနှစ်သက်လျှင်ကျွမ်းအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်" ဖြစ်စေခြင်းဖြင့် run တစ်ဦးချင်းစီမှ randomized နှင့် screen ပေါ်မှာညွှန်ပြခဲ့ပါတယ် အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်များ) CS- အဖြစ် CS + နှင့်ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုသာ CS + အောက်ပါတုံ့ပြန်မှု (မမှန်ကန်ကြောင်း) သော်လည်း£ 0.50 တစ်အနိုင်ရမှဦးဆောင် "ကျွန်မကြိုက်တတ်တဲ့" မှန်ကန်သော CS- အောက်ပါတုံ့ပြန်မှု£ -0.10 တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းမှဦးဆောင် "ကျွန်မကြိုက်တတ်တဲ့" ။ နှစ်ဦးစလုံး CS- အောက်ပါတုံ့ပြန်မှု "ကျွန်မပိုနှစ်သက်ကြပါဘူး" နှင့်တစ်ဦး CS + အောက်ပါ (မမှန်ကန်ကြောင်း) "ငါကြိုက်တတ်တဲ့ကြဘူး" တုံ့ပြန်မှုအနိုင်ရမဟုတ်သလိုအရှုံးမမှဦးဆောင်။ ပြင်ဆင်ရန် ပုံရိပ်တွေ 1 s ကို (ISI =2s) ကိုတစ်အဖြူ fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်မီးခိုးရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်3s အတွက်ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ, အစားရလဒ်ထက်မျှော်လင့်ဆုချ) အာရုံကြောဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုကတော့တင်ဆက်ပုံရိပ်တွေကန့်သတ်ခံခဲ့ရကြောင်းသေချာစေရန်အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ချက်ရုံးတင်စစ်ဆေးအခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်ပေးထားခဲ့သည်။ အဲဒီအစားဘာသာရပ်များ (တစ်ဦးချင်းစီအရေးပေါ်နှင့်အတူ2လုပ်ကွက််) တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုပြီးနောက်၎င်းတို့၏ခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များအဖြစ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်တတ်နိုင်သမျှအပေါင်းတို့နှင့်ဝင်ငွေရရှိမှုသာ 20% ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီက။
အားလုံးပုံရိပ်တွေခဲ့သည်ဆို၏-မီးခိုးရောင်နှင့် 127 တစ်အတောအတွင်းမီးခိုးရောင်-တန်ဖိုးနှင့် 75 တစ်ဦးစံသွေဖည်ဖို့ပုံမှန်ရှိကြ၏။ မြင်ကွင်းများ၏အဘယ်သူမျှမရှင်းမှမျက်နှာများအပါအဝင်လူသား၏လူသားသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံဖော်။
ဘာသာရပ်တစ်ခုစီသည်စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီသင်တန်းနှစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုနှင့်ဆင်တူသည်သင်တန်းနှစ်ခုစလုံးသည်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းအဆင့်နှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုကာလအတွင်းပုံ ၁၀ ပုံသာကျပန်းစနစ်ဖြင့် (၂ ခု - ၁.၅ စက္ကန့်; ISI = ၃ စက္ကန့်) တင်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသည်သူတို့၏အတွင်းပိုင်း / ပြင်ပအဆင့်ကိုဖော်ပြသည်။ အဓိကစမ်းသပ်မှုအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့, ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းနှင့်ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေအပါအဝင်မှတ်ဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီး preference ကိုတရားသဖြင့်စီရင်တာဝန်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, လေ့ကျင့်ရေး session တစ်ခု 10 အတွက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုအပြီးစမ်းသပ်မှု -by- ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်အခြေခံပြီးတုံ့ပြန်ချက်ခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွင်လှုံ့ဆော်မှု / တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပြီးတိုင်းချက်ချင်းဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်ကိုမပြသပါ။ သင်တန်းတစ်ခုစီပြီးနောက်ဘာသာရပ်၏ဘဏ္rewardာရေးဆု (အများဆုံး£ 1.5) ကိုထိုဘာသာရပ်သို့အစီရင်ခံခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု (၂) တွင်ဘာသာရပ်များသည်တုန့်ပြန်မှုအရေးပေါ်ပိတ်ဆို့မှုအတွက်အကျွမ်းတ ၀ င် ၁၀ ခုနှင့်ဝတ္ထု ၁၀ ခုပါ ၀ င်သည့်သင်တန်းတိုတိုကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။
တစ်နေ့မှာတော့အကြာတွင်ဘာသာရပ်များသည် "သိ / သတိရ" လုပ်ထုံးလုပ်နည်း [Tulving အောက်ပါတခုဖွစျပှားအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်ဖျော်ဖြေ1985] ။ ဒီနေရာမှာကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်အားလုံး 240 ယခင်ကမြင်ကြဓါတ်ပုံတွေကို (အခွအေနေနှုန်း 60) ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်၏ဗဟိုအပေါ် 60 သစ်ကို distractor ရုပ်ပုံများနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ Task ကို: အဆိုပါဘာသာရပ်ပထမဦးဆုံးသူတို့ဘက်၌တရားအညွှန်းကိန်းသို့မဟုတ်လက်ခလယ်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးချင်းစီတင်ဆက်ရုပ်ပုံတစ်ခု "သစ်ကို / အဟောင်းများကို" ဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။a"ကိုသစ်ကို" ဆုံးဖြတ်ချက်အပြီးတွင်ဘာသာရပ်များနောက်တဖန်သူတို့ဘက်၌တရားလက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကိုအသုံးပြုပြီး, ( "ခန့်မှန်း") သူတို့ ( "ဆက်ဆက်အသစ်များကို") သို့မဟုတ်မသေချာယုံကြည်မှုခဲ့ကြသည်ရှိမရှိညွှန်ပြသတိပေးခံရခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များ ( "တုန့်ပြန်သတိရ") သူတို့လေ့လာမှုမှာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်လျှင်အကြောင်းကိုတိကျတဲ့တစ်ခုခုမှတ်မိဖို့နိုငျခဲ့ကွပါလျှင်ညွှန်ပြသတိပေးခံရခဲ့ကြသည်တစ်ခု "အဟောင်း" ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးနောက်ရုံဆိုစာမျက်နှာအတွေ့အကြုံကို ( "အကျွမ်းတဝင်" တုံ့ပြန်မှု) မပါဘဲပုံနှင့်အတူကျွမ်းခံစားခဲ့ရသို့မဟုတ် မျှသာပုံဟောင်းတဦးတည်း ( "မှန်းဆ" တုံ့ပြန်မှု) ခဲ့ကြောင်းခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်နှစ်ခုလုံးစီရငျခကျြတစျခုစီလုပ်4့ခဲ့သည် 15 ဓါတ်ပုံတွေကိုအပြီး 75 s ကိုတစ်ဦးချိုးရှိ၏။
ကျနော်တို့ "birdcage" နိယာမအပေါ်အခြေခံတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ quadrature transceiver ကိုကွိုင်သုံးပြီးပဲ့တင်သံပြိုပုံရိပ် (EPI) နဲ့တစ်ဦး 3-တက်စလာ Siemens Allegra သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကင်နာ (Siemens, Erlangen, ဂျာမနီ) ရက်နေ့တွင် fMRI ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ 48 × 2; မှာ angled အသံအတိုးအကျယ်နှုန်း 64 Oblique axial ချပ်: ရရှိသော (matrix ကိုအရွယ်အစားခဲ့ကြသည်အသွေးသည်အောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) ဆနျ့ကငျြဘနှင့်အတူအသံအတိုးအကျယ်နှုန်း; (တပြင်လုံးကိုခေါင်းကိုဖုံးအုပ် EPI-sequence ကို) ကအလုပ်လုပ်တဲ့ session တစ်ခုမှာတော့ 64 T48 * ပုံရိပ်တွေ -weighted အဆိုပါ antero-posterior ဝင်ရိုးထဲမှာ -30 °; Spatial resolution ကို:3×3×3မီလီမီတာ; TR = 3120 ms; TE = 30 ms; PP =0MT / မီတာ * ms ၏ z-shimming Pre-သွေးခုန်နှုန်း gradient ကိုယခုအချိန်တွင်; အပြုသဘောအဆင့် ) polarity က -encoding ။ အဆိုပါ fMRI ဝယ်ယူ protocol ကို et al, Deichmann [ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျဒေသများနှင့်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဒေသများတွင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်-သွေးဆောင် BOLD sensitivity ကိုဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချဖို့ optimized ခဲ့သည်။2003; et al Weiskopf ။ 2006] ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘာသာရပ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဒေတာ session တစ်ခုနှုန်း volumes ကို 180 င်သုံးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အစည်းအဝေးများအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ စီးရီးတစ်ခုချင်းစီ၏အစတွင်ထပ်တိုး volumes ခြောက်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်သောအခြေအနေကိုတိုးမြှင့်စေရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက်နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ ဦး နှောက်၏ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်များကိုပရိုတွန်သိပ်သည်းမှု၊ T3 နှင့် magnetization transfer (MT) ကို ၁ မီလီမီတာ resolution ဖြင့် multi-echo 1D FLASH သုံး၍ စုဆောင်းခဲ့သည် [Helms, et al ။ 2009; Weiskopf နှင့်ပဲ့, 2008] နှင့် T1 ချိန်ပြောင်းပြန်လှန်ပြန်လည်နာလန်ထူအားဖြင့် EPI (IR-EPI) ပာကိုပြင်ဆင် (matrix ကိုအရွယ်အစား: 64 × 64; 64 ချပ်; Spatial resolution ကို:3×3×3မီလီမီတာ) ။ 64 ချပ်;; Spatial resolution ကို = 64 × 64 ×3မီလီမီတာ; ကွာဟမှု =3မီလီမီတာ; ရေတို TE =3ms; ရှည်လျား TE = 1 ms ထို့အပြင်တစ်ဦးချင်းစီကိုလယ်မြေပုံနှစ်ဆပဲ့တင်သံလျှပ်တစ်ပြက်မီး sequence ကို (matrix ကိုအရွယ်အစား = 10 × 12.46 အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည် ; TR = 1020 ms) et al အဆိုပါဝယ်ယူ EPI ပုံရိပ်တွေ၏ပုံပျက်ဆုံးမခြင်း [Weiskopf များအတွက်။ 2006] ။ et al က "FieldMap Toolbox" [Hutton, အသုံးပြုခြင်း။ 2002, 2004] လယ်ကွင်းမြေပုံရေတိုနှင့်တာရှည် TE မှာဝယ်ယူရုပ်တုဆင်းတုအကြားအဆင့်ခြားနားချက်ကနေခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ fMRI ဒေတာ preprocessed နှင့်ကိန်းဂဏန်းများ SPM5 software ကိုအထုပ် (Neuroimaging များအတွက် Wellcome Trust မှစင်တာ, တက္ကသိုလ်ကောလိပ်လန်ဒန်, ဗြိတိန်) နှင့် MATLAB ကို7(အဆိုပါ MathWorks, Inc, Natick, MA) ကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပထမဦးဆုံးအသံအတိုးအကျယ်မှရှိမယ်ခြင်းဖြင့်ရွေ့လျားမှုအပိုငျးအဘို့အတညျ့ကြသည် ဟူ. ၎င်း, Hutton [လယ်ပြင်မြေပုံပေါ်တွင်အခြေစိုက်ပျက်ယွင်းမှုအတွက်တညျ့, et al ။2002]; သည် "Unwarp Toolbox" ကို အသုံးပြု. ရွေ့လျားမှုနှင့်ပုံပျက်၏အပြန်အလှန် et al [Andersson များအတွက်တညျ့။ 2001; et al Hutton ။ 2004]; စံ T1 မာန်တင်း SPM-template ကို [Ashburner နှင့် Friston မှ Spatial Normal, 1999] (စောင့်ရှောက်မှုအထူးသဖြင့် midbrain ဒေသများအတွက်စံ-template ကိုအတူ aligned ကြောင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်);2×2×2မီလီမီတာမှ Re-နမူနာ; နှင့်အကျယ်-အပြည့်အဝဝက်အများဆုံး Gaussian kernel ကိုတစ်ဦး isotropic4မီလီမီတာနှင့်အတူပန်းခင်းလမ်း။ တစ်ဦးအတော်လေးသေးငယ်တဲ့တင်ပါသည် kernel ကိုနဲ့ပေါင်းပြီးထိုသို့သောဒဏ်ငွေ-စကေး Spatial resolution ကိုဘယ်မှာ differential ကို activation ပုံစံများအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြား (ဆိုလိုသည်မှာအသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်အဆိုပါ midbrain နှင့် MTL ဒေသများအတွင်းဥပမာ, activation ၏သေးငယ်ပြွတ် detect နိုင်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အခြေခံဖြစ်ပါသည် ) နီးကပ်နီးကပ် et al [Bunzeck, တည်ရှိသောခံရပေလိမ့်မည်။ 2010] ။ အဆိုပါ fMRI အချိန်စီးရီးဒေတာ High-pass filtered (cutoff = 128 s) ကိုတို့အနေနဲ့ AR (1) -model သုံးပြီး whitened ။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related စာရင်းအင်းမော်ဒယ်အချိန်နှင့်အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားအနကျအဓိပ်ပါယျနှင့်အတူပေါင်းစပ်ကို Canon hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုအတူ convolved ခဲ့သည့်တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ရပ်စတင်ခြင်း (ကြာချိန် =0့), များအတွက် "ချောင်းကို function ကို" ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည် [Friston, et al ။ 1998] ။ လုပ်ပါတယ်အခြေအနေများဝတ္ထု-ဆုခခြံ, ဝတ္ထု--ဆုခခြဲ့မဟုတ်, အကျွမ်းတဝင်-ဆုခခြံ, အကျွမ်းတဝင်မ-ဆုခခြံနှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းတုံ့ပြန်မှုပါဝင်သည်။ ကျန်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှု-related အပိုငျးအဖမ်းဆီးဖို့ခြောက်လ covariates မျှအကျိုးစီးပွား regressors အဖြစ် (ထိုသုံးတင်းကျပ်-ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာပြန်ချက်နှင့်ရှိမယ်, ကနေရရှိလာတဲ့သုံးလည့်) ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဒေသတွင်းတိကျတဲ့အခွအေနေသက်ရောက်မှု linear တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ထူးခွားသညျ့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေ (ပထမအဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ) အလုပ်သမားတို့ကစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ရရှိလာတဲ့ဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေဒုတိယအဆင့်ကျပန်း-သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်သို့ဝငျခဲ့သညျ။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေ၏ hemodynamic သက်ရောက်မှုတစ်2×2သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် (အကြိုးမပေး, အကြိုး) ကိုအချက်များ "ဆုလာဘ်" နဲ့ (ANOVA) ကှဲလှဲ၏လေ့လာဆန်းစစ်နှင့် "အသစ်အဆန်း" (ဝတ္ထု, အကျွမ်းတဝင်) ။ ဒါကမော်ဒယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုလာဘ်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအကြားအပြန်အလှန်၏အသစ်အဆန်း, အဓိကသက်ရောက်မှု၏အဓိကသက်ရောက်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အားလုံးထူးခွားသညျ့မှာ thresholded ခဲ့ကြသည် P အဆိုပါဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း မှလွဲ. = 0.001 (uncorrected) (P = uncorrected 0.005,) ။ နှစ်ဦးစလုံးအတော်လေးလစ်ဘရယ်တံခါးခုံပု mesolimbic သည့်စနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိကျသောတစ်ဦးခန္ဓာဗေဒယူဆချက်အပေါ်အခြေခံပြီးရွေးကောက်တော်မူခဲ့ကြသည်။
သိသာထင်ရှားသော activation ၏ခန္ဓာဗေဒမူပြောင်းခြင်းအုပ်စုနှစ်ခုတင်းပလိတ်များထဲမှအပေါ် SPM မြေပုံများ superimposition အားဖြင့်စံ stereotaxic atlas ကိုကိုးကားနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ T1-weighted နှင့် MT-weighted group template ကိုဘာသာရပ်အားလုံး၏ပုံမှန် T1 သို့မဟုတ် MT ပုံရိပ်များ (1 × 1 × 1 mm spatial resolution) မှရရှိသည်။ T1-template သည် MT-images များမှ midbrain အပြင်ဘက်တွင်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာနေရာချထားခြင်းကိုခွင့်ပြုသော်လည်း SN / VTA ဒေသကိုပတ် ၀ န်းကျင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တောက်ပသောအစင်းအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကပ်လျက်အနီရောင်နျူကလိယနှင့် ဦး နှောက် peduncle မှောင်မိုက်နေပုံရသည်။ [Bunzeck နှင့် Duzel,2006; et al Bunzeck ။ 2007; et al Eckert ။ 2004].
ကျနော်တို့ဟူသောဝေါဟာရကို SN / VTA သုံးပါနှင့်အတော်ကြာအကြောင်းပြချက် [Duzel, et al များအတွက်တစ်ခုလုံးကို SN / VTA ရှုပ်ထွေးထံမှ BOLD လှုပ်ရှားမှုစဉ်းစားရန်ပိုနှစ်သက်ကြောင်းသတိပြုပါ။2009] ။ တစ်ဦးခန္ဓာဗေဒ entity အဖြစ် VTA ၏အစောပိုင်းဖော်မြူလာနှင့်မတူဘဲကွဲပြားခြားနားသော dopaminergic အနာဂတ်လမ်းကြောင်းလူစုခွဲကြသည်နှင့် SN / VTA ရှုပ်ထွေးအတွင်းထပ်။ အထူးသဖြင့်, dopamine အာရုံခံကြောင်းစီမံကိန်းသည် limbic ဒေသများနှင့်ဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူထိန်းညှိသည့် VTA မှချုပ်ထားကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်သူတို့က SN (ပိုဒျ compacta အ) [Gasbarri, et al တစ်လွှားမှာလည်းဖြန့်ဝေနေကြသည်။ 1994, 1997; Ikemoto, 2007; Smith ကနှင့် Kieval, 2000] ။ function, ဒီ [et al ဥပမာအားဖြင့် Ljungberg, အဘို့မြင် SN နှင့် VTA အတွင်းလူသားများနှင့်မျောက်ဝံများ DA အာရုံခံဆဲလျအတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်းနှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်သောတကယ်တော့ paralleled ဖြစ်ပါတယ်။ , 1992 သို့မဟုတ် Tobler, et al ။ , အသံဖမ်းက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ဦးပုံဖော်တင်ဆက်ဘို့ 2003] ။
အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (အမူအကျင့်များနှင့် fMRI) မှန်ကန်သော preference ကိုတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအခင်းအကျင်းအတွက်အခြေအနေများအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသည်ဘာသာရပ်များ (စားပွဲတင်ငါ) နှင့်အခြေအနေများအကြားမျှမကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏။ တုံ့ပြန်မှုအချိန် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘာသာရပ်များလှုံ့ဆော်မှု (အားလုံးခန့်မှန်းအကျွမ်းတဝင်ဆုလာဘ်မှအမြန်ဆုံးတုန့်ပြန်ကြောင်းထင်ရှား P's <0.007), ဒါပေမယ့်အခြားအခြေအနေသုံးခု (ဝတ္ထု - ဆု, ဝတ္ထု - မဆု, အကျွမ်းတဝင် - မဆုခ) အကြားမျှခြားနားချက်ရှိ၏ P's> 0.05) ။
အမူအကျင့်ရလဒ်များကို။ (က) တုံ့ပြန်မှု-ကြိမ်။ နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်များတွင် RTs ရှိသမျှသည်အခြားသောအခြေအနေများ (အားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကျွမ်းတဝင်ဆုလာဘ်ပုံရိပ်တွေဘို့သိသိသာသာပိုမြန်ခဲ့ကြ P <0.01) - ကြယ်ပွင့်အားဖြင့်ညွှန်ပြသော်လည်း - အခြားခြားနားချက်မရှိ ...
အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်-ဒုတိယနေ့ဖြစ်၏။ အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ယခင်ကကုဒ်သွင်းစဉ်အတွင်းမြင်ကြဓာတ်ပုံများကိုအောက်ပါတုံ့ပြန်မှုသိတုံ့ပြန်မှုသတိရပါ) နှစ်ဦးစလုံး hits အပေါ်အခြေခံပြီး, မမှန်သောနှိုးစက် ([အက်ဖ်အေ]: distractors မှသိသတိရပါ) ခံခဲ့ရသည်။ နှုန်းပစ္စည်းများများ၏အရေအတွက်အားဖြင့် (အသီးသီးနှင့်အက်ဖ်အေ) ကပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတှငျကြှနျုပျတို့ remember- ၏အချိုးအစားတွက်ချက်နှင့် hits အရေအတွက်ခွဲဝေခြင်းဖြင့်အဟောင်းနှင့်အသစ်ပုံရိပ်တွေများအတွက် (ဆိုလိုသည်မှာ, hit-နှုန်းထားများနှင့်အက်ဖ်အေ-နှုန်းထားများ)-တုံ့ပြန်မှုကိုသိရ အခွအေနေ။ ဒုတိယအချက်မှာ hit-နှုန်းထားများ ([Rcorr]-rate ကိုထိမှန်အနုတ်အက်ဖ်အေ-rate ကိုသတိရမှတ်မိ) သတိရ-တုံ့ပြန်မှုများအတွက်ရရှိသောနှင့်သိကျွမ်း-တုံ့ပြန်မှု ([Kcorr]-rate ကိုထိမှန်အနုတ်အက်ဖ်အေ-မှုနှုန်းကိုသိကိုသိရ) (ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြတညျ့ စားပွဲတင် II ကို) ။ တစ်စီစဉ်ထားနှိုင်းယှဉ်တှငျကြှနျုပျတို့ဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်တွေများအတွက်ခြုံငုံအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ် (ကိုဆုံး hit-မှုနှုန်း = Rcorr + Kcorr) ရက်နေ့တွင်ဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ ဤ (ဝတ္ထုဆုခခြဲ့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေသည်ဆုလာဘ်သိသိသာသာတိုးတက်ခြုံငုံမှတ်ဉာဏ်ထင်ရှားP = 0.036) ပေမယ့်အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်တွေများအတွက်ဆုလာဘ်အားဖြင့်ခြုံငုံမှတ်ဉာဏ်မရှိထိုကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုရှိခဲ့ (P > 0.5; သဖန်းသီး။ 2) ။ ကှဲလှဲ (ANOVA ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်ထို့အပြင်ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေများအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှတ်ဉာဏ်အပေါ်ဆုလာဘ်များတိုးမြှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုစာမျက်နှာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဘို့အညီအမျှအားကောင်းတဲ့ရှိ၏ဆုလာဘ်များနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်အမျိုးအစားအကြားမျှအပြန်အလှန် [F(1,16) = 2.28, P > 0.15)] ။
စားပွဲတင် II ကို
စမ်းသပ်မှု 1 ၌ရှိသကဲ့သို့, ဘာသာရပ်များမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အခြေအနေများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု (နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအခင်းအကျင်းအတွက်အခြေအနေများအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသည်စားပွဲတင်ငါ) ။ စမ်းသပ်မှု 1, တုံ့ပြန်မှုအချိန် (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားလုံး (တုံ့ပြန်မှုအကျွမ်းတဝင်ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်သိသိသာသာပိုမြန်ခဲ့ကြသည်ပြသ P's <0.001) သို့သော်အခြားအခြေအနေသုံးခု (ဝတ္ထု - ဆု, ဝတ္ထု - မဆု, အကျွမ်းတဝင် - မဆု - အပေါငျးတို့သခြားနားချက်မရှိ။ P's> 0.05) ။
အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်-ဒုတိယနေ့ဖြစ်၏။ ; 1 စမ်းသပ်မတူဘဲ, ဝတ္ထုဆုခခြံပုံရိပ်တွေများအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှတ်ဉာဏ်သိသိသာသာဝတ္ထု unrewarded ပုံရိပ်တွေ (ခြုံငုံအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်ကိုလည်းမ Rcorr / Kcorr မနှိုင်းယှဉ်တိုးတက်မခံခဲ့ရ P > 0.05, စားပွဲတင် II ကို) ။ ဒါ့အပြင် 1 စမ်းသပ်မတူဘဲအတွက်စမ်းသပ်မှုအတွက်အကျွမ်းတဝင်ဆုလာဘ်ပုံရိပ်တွေများအတွက်2စာမျက်နှာသိသိသာသာ (အကျွမ်းတဝင်-ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်P = 0.001, စားပွဲတင် II ကို) (ဆုခခြံအကျွမ်းတဝင်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်-ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေ၏တညျ့ Know-နှုန်းထားများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိ၏အကျွမ်းတဝင်-ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဆုခခြံအကျွမ်းတဝင်များအတွက်ပိုမိုခြုံငုံမှတ်ဉာဏ် (Rcorr + Kcorr) တွင်ဖြစ်ပေါ်ရာ P > 0.05) ။ ထို့အပြင်အတွက်ဒေတာ စားပွဲတင် II ကို နှင့် ပုံ 2B တစ်ဦးရောနှောသက်ရောက်မှု ANOVA ကထောက်ခံခဲ့သည့် 2, စမ်းသပ်နှိုင်းယှဉ်ခြုံငုံမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြောင်းပြသထားတယ်။
fMRI ရလဒ်များကို-ဆုလာဘ်အခြေစိုက်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့အချက်များ "အသစ်အဆန်း" (ဝတ္ထု, အကျွမ်းတဝင်) နှင့် "ဆုလာဘ်" (ဆုလာဘ်မရှိဆုလာဘ်) နဲ့တစ်ဦး2×2ANOVA သုံးပြီး fMRI data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျနော်တို့ (နှစ်နိုင်ငံ medial orbitofrontal cortex (mOFC) နှင့် hippocampus နှင့် rhinal cortex အပါအဝင်ညာဘက် MTL အတွက်အသစ်အဆန်းတစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့သဖန်းသီး။ 3; ) activated ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ဇယား S1 ပံ့ပိုးကြည့်ပါ။ ဆုလာဘ်တစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (နှစ်နိုင်ငံ caudate, septum / fornix, ventral striatum (ncl ။ accumbens), နှစ်နိုင်ငံ mOFC အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်နှင့် prefrontal cortex (mPFC) medial ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 4; ) ပြန်ကြားရေးစားပွဲတင် S1 supporting ။ အဲဒီနှစျခုအဓိကသက်ရောက်မှုသီးသန့်သီးသန့်ဖုံးအုပ် (interaction က၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူရှာဖွေ Install လုပ်နိင်ခဲ့ကြ, P uncorrected = 0.05) မဆိုအပြန်အလှန်၏မရှိခြင်းအတွက်အဓိကသက်ရောက်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းသူတို့သာဒေသများသိရှိနိုင်ဖို့။
fMRI စမ်းသပ်မှု2ရလဒ်များ။ အသစ်အဆန်းတစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုညာဘက် hippocampus (က) အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာ, rhinal cortex (ခ) နှင့် OFC (C) medial ခဲ့သည်။ activation မြေပုံ (နည်းလမ်းများကိုကြည့်ပါ) တစ်ဦး T1 မာန်တင်းအုပ်စုတစ်စု template ကိုအပေါ် superimposed ကြသည်ကိုသြဒီနိတ် MNI အာကာသအတွင်းပေးထားကြသည် ...
fMRI စမ်းသပ်မှု2ရလဒ်များ။ ဆုလာဘ်တစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု ncl အပါအဝင် striatum အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ accumbens (က) နှင့် caudate ncl ။ (C) septum / fornix (ခ), medial PFC (C) နှင့် OFC (ဃ) medial ။ activation မြေပုံတစ် T1 မာန်တင်းအုပ်စုတစ်စု template ကိုအပေါ် superimposed ခဲ့ကြသည် ...
ရှာဖွေရေးဆုကြေးငွေယူဆချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ခုဟောကိန်းများစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအပိုဆောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာဒေသများလည်းအကျွမ်းတဝင်ကြိုးကို ပေး. လှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, တွဲဖက်) ထက်ဆုခခြဲ့တ္ထုများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းတုံ့ပြန်မှုပြသပေးသောကျနော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆုလာဘ်တစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုပြဦးနှောက်ဒေသများအတွင်း။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းထက်ပိုမိုအားကောင်းဆုလာဘ်ခန့်မှန်းတုံ့ပြန်မှုမှဘယ်မှာဖြစ်ခြင်းဝတ္ထုခဲမျှမကဦးနှောက်ဒေသများရှိအကြံပြုခြင်းမဆိုသိသာရလဒ်များကိုလိုက်လျောခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယအကျနော်တို့အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားအပြန်အလှန် (F-ဆနျ့ကငျြဘ) အကဲဖြတ်။ ထိုသို့သောတစ်ဦးအပြန်အလှန် (ပြန်ကြားရေးစားပွဲတင် S1 ပံ့ပိုးညာဘက် hippocampus, ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus နှင့်ညာဘက် OFC အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် သဖန်းသီး။ 5) ။ အထူးသဖြင့် hippocampus ဖြစ်ခြင်းဝတ္ထုဆုခခြဲ့ရာဆက်စပ် (ကို T-ဆနျ့ကငျြဘ) တွင်တင်ပြလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူမျှော်မှန်းအပြန်အလှန်ပုံစံပြသခဲ့သည်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, hippocampal လှုပ်ရှားမှုဝတ္ထုဆုခခြံလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ဝတ္ထု unrewarded နှင့်အကျွမ်းတဝင်ကြိုးကို ပေး. လှုံ့ဆော်မှုသည်ထက်အကျွမ်းတဝင် unrewarded လှုံ့ဆော်မှု (ဤလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခုစလုံးအတူတူအခြေအနေတွင်တင်ပြခဲ့ကြသည်သတိပြုပါ) (နောက်တဖန်ဤလှုံ့ဆော်မှုများ၏နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တင်ပြကြသည်ကိုသတိပြုပါ တူညီသောအခြေအနေတွင်) ။ စီစဉ်ထားတဲ့ post ကို hoc နှိုင်းယှဉ် (ဝတ္ထု-ဆုခခြဲ့တ္ထု-ဆုခခြဲ့မဟုတ် vs. အကြားကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုကိုအတည်ပြုP <0.025) နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဆုနှင့်အကျွမ်းတဝင် - မဆုခ (vs. အကျွမ်းတဝင်)P <0.01; သဖန်းသီး။ 5).
fMRI စမ်းသပ်မှု2ရလဒ်များ။ အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အဆိုပါ hippocampus နှင့် OFC အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ အခြေအနေတွင်တင်ပြလျှင်အကျွမ်းတဝင်-ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပစ္စည်းများဖို့ hippocampus တုံ့ပြန်မှုအတွင်းအကျွမ်းတဝင်-ဆုခခြံပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုခဲ့သည် ...
ဒါဟာအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားအပြန်အလှန်အဘို့အသော activation ပုံစံ (36, -14, -16 သတိပြုသင့်သည်, သဖန်းသီး။ 5) ကပ်လျက်ဒါပေမယ့်လည်းလက်ျာ hippocampus (28, -14, -20 အတွင်းတည်ရှိပြီးသောအသစ်အဆန်းတစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများ activation မှတူညီမျှမက, သဖန်းသီး။ 3) ။ ထိုသို့သော differential ကို activation ပုံစံတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူ့ fMRI လေ့လာမှုများ၌အကြှနျုပျတို့၏ယူဆချက်, ဆဲလ်အသံသွင်းဖို့ညီ။ ဥပမာ, တိရိစ္ဆာန်သုတေသနကွဲပြားခြားနားသော hippocampal အာရုံခံတူညီသောတာဝန် [ဘရောင်းနှင့် Xiang, အတွင်း (ထိုကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်ကျွမ်းကဲ့သို့) ကွဲပြားခြားနားသော features တွေတုံ့ပြန်နိုင်မပြသခဲ့သည်1998] ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, ငါတို့ Spatial ကွဲပြား hippocampal Active အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့၏ differential ကိုဂုဏ်သတ္တိများကိုထင်ဟပ်နိုင်သောလူသားအကြွင်းမဲ့အာဏာအသစ်အဆန်းအချက်ပြမှုများမှာပြပြီ, adapter et al [Bunzeck, (, အသစ်အဆန်းအချက်ပြမှုများနှင့်အသစ်အဆန်းခန့်မှန်းအမှားများကိုပြခဲ့သည်ဆို၏။ 2010]) ပြန်ကြားရေးပုံ။ S4 ပံ့ပိုး။ ဂျွန်ဆင် et al ။ (2008) activation ၏ Spatial အလွန်နီးကပ်ပြွတ်အသစ်အဆန်းရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုများကိုပြသကြောင်းအစီရင်ခံ: အခြားစပျစ်သီးပြွတ်တိုးမြှင့်ရေးလှုံ့ဆော်ကျွမ်းတဲ့ function ကိုအဖြစ် linear တုံ့ပြန်မှုလျှော့ပြသသော်လည်းတဦးတည်းသီးပြွတ်အသစ်သောပစ္စည်းများနှင့်အဟောင်းပစ္စည်းများအကြားတစ်ဦးအမျိုးအစားခြားနားချက်ပြသခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ထပ်မိစ္ဆာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေထုတ်ပယ်ဖို့ကျနော်တို့အသံအတိုးအကျယ်အတိုင်းညာဘက် anterior hippocampus သုံးပြီး activation ပုံစံများနှစ်ဦးစလုံးမှသေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်ဆုံးမပဲ့ပြင်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုရောက်ရှိP ≤ 0.05; FWE-တညျ့) ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ (အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းစမ်းသပ်မှု2ကနေဒေတာတွေကိုနှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်) ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကို အသုံးပြု. ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများမှဆုလာဘ် related မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုလင့်ထားသည်ငှါရှာကြံလေ၏။ ပထမဦးစွာဝတ္ထု-ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေ vs. ဆုခဆနျ့ကငျြဘဝတ္ထု regressor အဖြစ်ဆုလာဘ်များကတစ်ဦးချင်းစီမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုသုံးပြီးတစ်စက္ကန့်-Level ရိုးရှင်းသောဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့ဝငျခဲ့သညျ (Δဝတ္ထု-ဆုခခြံများအတွက် hit-မှုနှုန်း = တညျ့ထိခိုက်မှုနှုန်း [Rcorr + Fcorr] တညျ့ -) ဝတ္ထု-ဆုခခြံမ hit-rate ကိုတညျ့။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆုလာဘ် (စမ်းသပ်မှု 1) နှင့်ယခင်အလားတူတွေ့ရှိချက် [Adcock, et al နေဖြင့်ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခြုံငုံမှတ်ဉာဏ် (ဆိုလိုသည်မှာ, စာမျက်နှာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း) ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးလေ့လာခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။2006; Krebs, et al ။ 2009; et al Wittmann ။ 2005] ။ ဒါက SN / VTA, ညာ anterior MTL (rhinal cortex hippocampus / amygdala ၏လမ်းဆုံ) နှင့်ညာဘက် ventral striatum (အတွင်း hemodynamic တုံ့ပြန်မှု (HR) နှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်ထင်ရှားသဖန်းသီး။ 6,) အားလုံး activated ဒေသများများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ဇယား S1 ပံ့ပိုး။ တစ်စက္ကန့်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများတွင်အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်များ (အကျွမ်းတဝင်ဆုလာဘ် vs. အကျွမ်းတဝင်မဟုတ်-ဆုလာဘ်) အတွက်တူညီတဲ့ဆနျ့ကငျြဘ (အပြုအမူ, စာမျက်နှာမှုနှုန်းသိသိသာသာ-ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဆုခခြံအကျွမ်းတဝင်များအတွက်မြှင့်တင်ရန်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမရှိခဲ့တစ်ဦးချင်းစီတိုးတက်လာသောစာမျက်နှာမှုနှုန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် Fcorr အတွက်တိုးတက်မှု) ။ အကျွမ်းတဝင်ကြိုးကို ပေး. ပုံရိပ်တွေများအတွက် RTs အကျွမ်းတဝင်-ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေဘို့ထက်သိသိသာသာပိုမြန်ခဲ့ကြပြီးကတည်းကတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအကြားကွာခြားချက်ကိုလည်း regressor အဖြစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ HR ကွဲပြားခြားနားမှု (ဆုခခြံကိုမကျွမ်းတဝင်အကျွမ်းတဝင်ကြိုးကို ပေး. vs. ) နှင့်တိုးမြှင့်စာမျက်နှာမှုနှုန်းအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှုပြသသောသူတို့ကိုဒေသများတွင်သာစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြ (အကျွမ်းတဝင်အကျွမ်းတဝင်ကြိုးကို ပေး. vs. -ဆုခခြဲ့မဟုတ်) သော်လည်းမသူတို့အားလည်းအတူမဆိုဆက်စပ်မှုပြ RT ကိုတိုးတက်မှု။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (အမည်ရ, ပထမဦးဆုံးဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလားတူသက်ရောက်မှုထင်ရှားသည့် ventral striatum (လက်ဝဲ), ညာဘက် hippocampus အတွင်း HR နှင့်ဆုလာဘ်-related စာမျက်နှာ-မှုနှုန်းတိုးတက်မှုအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်နှင့် rhinal cortex leftသဖန်းသီး။ 7,) ပြန်ကြားရေးစားပွဲတင် S1 ပံ့ပိုးပေမယ် SN / VTA အတွင်းအဘယ်သူမျှမဆက်စပ်။ ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေများအတွက်သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုကိုလည်း hemodynamic တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်တွေများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစာမျက်နှာနှုန်း (အကြားမရှိ, ဆက်စပ်ထင်ရှားပြသသော SN / VTA voxel [4, -18, -16] ၏တစ်ဦးကစာရင်းအင်းကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာr = -0.07, P = 0.811) ။
fMRI စမ်းသပ်မှု 2-ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရလဒ်များ။ -ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေ (Δ hit-rate ကိုတညျ့) နှင့်ဝတ္ထုအကြား hemodynamic တုံ့ပြန်မှုကွဲပြားခြားနားမှုနှိုင်းယှဉ်ဆုခခြံဝတ္ထုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုများအကြားတစ်ဦးကသိသိသာသာဆက်စပ် ...
fMRI စမ်းသပ်မှု 2-ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရလဒ်များ။ အကျွမ်းတဝင်-ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေ (Δစာမျက်နှာမှုနှုန်း) နှင့်အကြား hemodynamic တုံ့ပြန်မှုကွဲပြားခြားနားမှုနှိုင်းယှဉ်ဆုခခြံအကျွမ်းတဝင်ဘို့အစာမျက်နှာမှုနှုန်းတိုးတက်မှုများအကြားတစ်ဦးကသိသိသာသာဆက်စပ် ...
(hippocampus နှင့် rhinal cortex အပါအဝင်) ကို MTL အတွင်း voxels တစ်စပျစ်သီးပြွတ်ဆုလာဘ်တစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအသစ်အဆန်းတစ်ခုအဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်ပေမယ့်မကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် (သင်္ဘောသဖန်း။ 3A, B,), အ hippocampus နှင့် rhinal cortex ဆုလာဘ်-တန်ဖိုးအသစ်အဆန်းလွတ်လပ်သောအချက်ပြနိုငျသောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါ hippocampus နှင့် rhinal cortex နှစ်ဦးစလုံးအသစ်အဆန်း [ဘရောင်းနှင့် Xiang မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများ၏ကျယ်ပြန့နှင့်အတူဤတွေ့ရှိချက်သဘောတူချက်,1998; Dolan နှင့်ဖလက်ချာ, 1997; Knight ဟာ, 1996; Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; ထူးဆန်းတဲ့, et al ။ 1999; et al ယာမာဂူချီ။ 2004] ။ သို့သော် hippocampus အတွင်းအခြားဒေသလည်း (အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်၏တွေးဆအပြန်အလှန်ပြသသဖန်းသီး။ 5) အကျွမ်းတဝင် unrewarded ပုံရိပ်တွေမှသိသိသာသာတိုးမြှင့် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းဝတ္ထုဆုခခြံခဲ့ရဘယ်မှာအခြေအနေတွင်တင်ပြလျှင်။
အဆိုပါ hippocampus အတွက်အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်ဒီအပြန်အလှန်ရှာဖွေရေးဆုကြေးငွေမူဘောင်နှင့်အညီတစ်ဦးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယခန့်မှန်းဘို့သက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေး ([Sutton နှင့် Barto တွေ့မြင်1981]) ကိုရှာဖွေရေး-ခေါင်းပုံဖြတ်အကြပ်အတည်းအတွင်းရှာဖွေရေးဆုကြေးငွေ၏တရားဝင်ဖော်ပြချက်သည်။ အသစ်အဆန်း [ဆုလာဘ်တစ်ခုတူးဖော်ရေးဆုကြေးငွေအဖြစ် Kakade နှင့်ဒါယန်းပြုမူနိုငျသောအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံ 2002] ကျွန်တော်ဖြစ်လျက်ရှိဝတ္ထုဆုခခြဲ့သောတစ်ဦးအခြေအနေတွင်အတွက်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှု (သူတို့ unrewarded များမှာလျှင်ပင်) ၏အစတူးဖော်ရေးအဲဒီမှာတိုးမြှင့်သင့်ကြောင်းခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုဆုလာဘ်များရရှိနိုင်မှုဆုလာဘ်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်အချက်ပြသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအခြေအနေတွင်မှနှိုင်းယှဉ်ပါကဝတ္ထုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်အချက်ပြခဲ့သည်ဘယ်မှာအခြေအနေတွင်ပိုမိုအားကောင်း hippocampal လှုပ်ရှားမှုရူးနှမ်း။ encoding ကနေစဉ်အတွင်း hippocampus အတွင်းဒါကဆက်စပ်အခြေအနေတိုးမြှင့်အာရုံကြော activation သို့သော်တိုက်ရိုက်ပစ္စည်းများကိုခန့်မှန်းဝတ္ထုဆုလာဘ်နှင့်အတူအခြေအနေတွင်တင်ဆက်သောအခါ, အကျွမ်းတဝင်ပစ္စည်းများများအတွက်ပိုကောင်းမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်, ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့ဘာသာပြန်ရန်မပေးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား, အသိအမှတ်ပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဦးစလုံးဝတ္ထု (စမ်းသပ်မှု 1) နှင့်အကျွမ်းတဝင် (စမ်းသပ်မှု 2) လှုံ့ဆော်မှု (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) များအတွက်တစ်ဦးကို item ၏ status ကိုခန့်မှန်းအကျိုးကိုမောင်းနှင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်အသစ်အဆန်းနှစ်ဦးစလုံး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသင်ယူရသောတစ်ခုစမ်းသပ် setting ကိုအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းလွှမ်းမိုးမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုနိုငျသညျ, ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ရှာဖွေရေးဆုကြေးငွေမူဘောင်နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်ခန့်မှန်းအတည်ပြုခဲ့သည်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ကျနော်တို့ဆုလာဘ်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဆုလာဘ်ပုံရိပ်တွေထက်ဆုခခြဲ့တ္ထုများအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာသိသိသာသာအားကောင်းလှုပ်ရှားမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ပြပေးသောမည်သည့်ဦးနှောက်ဒေသများမတှေ့ခဲ့ပေ။ ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်မှာ, ဒီအနုတ်လက္ခဏာတွေ့ရှိချက်ယခင်လေ့လာမှုများ [Krebs, et al နဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။2009; et al Wittmann ။ 2008] ။ သို့သော်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် Krebs et al ။ [ 2009] နှင့် Wittmann et al ။ [ 2008] လေ့လာမှု, ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပိုကောင်းဆုလာဘ်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှု၏အသစ်အဆန်း status ကိုသွယ်ဝိုက်ကြီးနှင့်သင်တန်းသားများပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဆုချမှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဘယ်မှာအခြေအနေများအောက်တွင်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ တကယ်တော့, Krebs et al ။ ဒီတိုးမြှင်သင်တန်းသားများကိုလှုံ့ဆော်မှု၏အသစ်အဆန်း status ကိုမှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးထက်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဆုချဖို့မတက်ရောက်သည့်အခါပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ (သို့သော်မှတ်ချက် Krebs အတွက် et al သော။ အသစ်အဆန်း status ကိုတစ်ဦးလျှင် se ဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မဟုတ်ခဲ့) ။ ထို့ကွောငျ့, အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ် (အကြားဆက်စပ်အပြန်အလှန်မတူပဲသဖန်းသီး။ 5), ရှာဖွေရေးဆုကြေးငွေဤကဏ်ဍပြင်းပြင်းထန်ထန် Task-မှီခိုဘာသာရပ်များအသစ်အဆန်းအကဲဖြတ်ရန်ရန်မလိုဘဲပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဆုချမှတကျရောကျနိုငျတဲ့အခါမှသာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာ Goto နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း [prefrontal နှင့် hippocampal သွင်းအားစုအတွက်နျူကလိယ accumbens (ထို ventral striatum ရဲ့အစိတ်အပိုင်း) ကိုကျော်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ကြောင်းကြွက်လေ့လာမှုများ၏အခြေခံပေါ်မှာအကြံပြုထားသည် 2008] ။ ဒါဟာအသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်မှတာဝန်-related အာရုံကိုထိုကဲ့သို့သောယှဉ်ပြိုင်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေမယ်လို့ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။
စမ်းသပ်မှု 1 ကနေအသိအမှတ်ပြုမှတ်ဉာဏ်ရမှတ် (သဖန်းသီး။ 2) ဝတ္ထုဘို့သော်လည်းမကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်၏အကျိုးကို-related အပြုအမူတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်ရှာဖွေရေးဆုကြေးငွေမူဘောင်နှင့်အတူကောင်းစွာသဟဇာတရှိကြ၏။ သို့သော် encoding ကအဆိုပါ fMRI စကင်နာ (စမ်းသပ်မှု 2) တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘယ်မှာအခြေအနေများအောက်တွင်ရရှိသောအမူအကျင့်ရလဒ်များကိုအကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည် (ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုအဘို့ဤတိုးမြှင့်အရေးပါမှုကိုမရောက်နိုင်ဘူး) ဆုလာဘ်အနေနဲ့တိုးမြှင့်ပြသပြုလေ၏။ စမ်းသပ်မှု 1 ဘို့သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ကြသည်သော်လည်းဒီကွာဟမှုများအတွက်အကြောင်းရင်းတစ်ခု ((ဘာသာရပ်များသင်ယူနှင့်အတူတူပင်အခန်းတစ်ခန်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်) စမ်းသပ်မှု2အတွက်လာမည့်နေ့၌ encoding ကစကားစပ်နှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းအခြေအနေတွင်တူညီခဲ့ဖြစ်နိုင်သည်အဆိုပါ fMRI အတွက် encoded ဘာသာရပ်များနှင့် ) တစ်ဦးစမ်းသပ်ခန်းထဲမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ encoding ကများနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းအခြေအနေတွင်အကြားအပြောင်းအလဲများမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည် [Godden နှင့် Baddeley အပေါ်လေးနက်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်နိုင်ကြောင်းလူသိများဖြစ်ပါသည်1975] ။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့အတူလိုက်ဖက်တဲ့, မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည် (စမ်းသပ်မှု2ထက်စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သဖန်းသီး။ 2) ။ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင်ဆိုးကျိုးများလည်းစမ်းသပ်မှု 1 နှင့်2အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အပြုအမူပုံစံများအတွက်ကွာဟမှုမှဦးဆောင်ကြလိမ့်မည်။
အဆိုပါ ventral striatum (သင်္ဘောသဖန်း။ 4A) နှင့် prefrontal cortex medial (သင်္ဘောသဖန်း။4ကို C, D,) မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးအဓိကသက်ရောက်မှုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဆုလာဘ်-ခန့်မှန်းခုနှစ်တွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအသစ်အဆန်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပျေါမှီခိုခြင်းနှင့်ထိုသို့မျှော်မှန်းဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုဖော်ပြဒေသများ (ventral striatum, septum / fornix) ကိုတင်ပြရုပ်ပုံဘို့မှတ်ဉာဏ်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်ကြောင်းသိသာသည်။ ထိုကဲ့သို့သော declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်မူလအစအဆိုပါ MTL ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, hippocampus နှင့် rhinal cortex, အ MTL ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, အသစ်အဆန်း၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါကြောင်းမသာ, ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းဖို့ rhinal cortex ကနေကြောင်း projection မှတ်သားခြင်း (ventral striatum နှင့် medial prefrontal cortex မှ efferents ပေးပို့ဖို့လူသိများကြသည် အဆိုပါ NACC အဆိုပါ entorhinal cortex et al [Friedman ကနေအဓိကအားရပ်တ။2002; et al Selden ။ 1998; Thierry, et al ။ 2000]) ။ အသစ်အဆန်းကိုဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုများသို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်တိကျသောယန္တရားများနှင့်တွက်ချက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှာမရှင်းလင်းပေ။ ၎င်းတွင်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီ (orbital အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်) medial prefrontal cortex ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ [O'Doherty, et al ။ 2004; Ranganath နှင့် Rainer, 2003] (အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ် related activation နှစ်ဦးစလုံး -expressedသင်္ဘောသဖန်း။ 3C နှင့် 4C, D ကို).
အဆိုပါအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် hippocampus အတွက်အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုများ၏ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်သက်ရောက်မှု, SN / VTA, ventral striatum နှင့် PFC medial အတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် Figure8။ ဒီမော်ဒယ်ထောက်ခံမှုပေး, ငါတို့အုပ်စုတစ်ခုဆက်စပ်မှုကိန်း R ကိုကာပေး, အ deconvolved အချိန်စီးရီးအပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုဘာသာရပ်တစ်ခု Spearman ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးအကျိုးစီးပွားကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းဒေသကြီးများ၏ activation အကြားဆက်စပ်မှုတွက်ချက် P-value ။
hippocampus အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးသိထားပုံဥပမာ, နျူကလိယ, (NACC) medial prefrontal cortex (mPFC) နှင့် substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ (SN / VTA) accumbens ။ ဒီမော်ဒယ်ထောက်ခံမှုပေး, ငါတို့အကြားဆက်စပ်မှုတွက်ချက် ...
ဆုလာဘ်အသစ်အဆန်းအပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်ခဲ့အချက်ပြမှုများ၏နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများကိုကိုယ်စားပြုသောတစ်ခုတည်းသောဒေသဟာ mPFC ခဲ့ကတည်းက, ဒီဒေသ (အသစ်အဆန်း-based ဆုလာဘ်အချက်ပြ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်R = 0.09; P <0.001) ။ hippocampus သည်အခြားတစ်ဖက်တွင် mPFC အတွက်အသစ်အဆန်းအချက်ပြအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။R = 0.11; P <0.001) ။ ဤသည်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် hippocampus မှ mPFC သို့တိုက်ရိုက်စီမံချက်များ [Ferino, et al] ။1987; ရိုနှင့်ဗန် Hoesen, 1977] ။ ဒါဟာ (ထို mPFC ဆုလာဘ် signal ကိုထို့နောက် NACC မှပါးကြောင်းလည်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်R = 0.09; P <0.001) နှင့် SN / VTA (R = 0.03; P = 0.08) ။ ဒါဟာ (ထို SN / VTA signal ကိုသာအသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှု mPFC ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းမှတ်သားရပါမည်R = 0.03; P = 0.08) သော်လည်းမအကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှု mPFC (R = 0.007; P > 0.6) ။ ဤအချက်က SN / VTA သို့ mOFC သွင်းအားစုများသည်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲထက်အသစ်အဆန်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောထို mPFC ဒေသများမှပိုမိုပြင်းထန်စွာပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ mPFC သည်အသစ်အဆန်းကိုတုံ့ပြန်သည်၊ SN / VTA အချက်ပြမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်သည်အကြံပြုချက်နှင့်လည်းကိုက်ညီသည် [Lisman and Grace, 2005] သ PFC dopaminergic circuitry သို့အသစ်အဆန်း signal ကိုတစ်ဦးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်အဆန်းအချက်ပြအတွင်း NACC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့သော်နေဆဲ et al [Duzel မသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။ 2009] ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးဟာ NACC အတွက်အချက်ပြအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုနှင့်အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှု mOFC ဒေသများ (ရှိခဲ့သည့် NACC အတွင်းအသစ်အဆန်းအချက်ပြမှုများကိုစောငျ့ရှောကျမပြုခဲ့ပေမယ့်ဒါကဖြစ်ပါသည်R = 0.09; P <0.001), NAcc နှင့်အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှု hippocampus ဒေသများ (R = 0.15; P <0.001), နှင့် NAcc နှင့် SN / VTA (R = 0.19; P <0.001) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်ရှိမြှားများသည်အရေအတွက်တွက်ချက်ထားသောကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှုထက်လူသိများသောစီမံချက်များ၏အခြေခံပေါ်တွင်ယူဆထားသော ဦး တည်ရာကိုညွှန်ပြသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်၏ဆုလာဘ် related တိုးတက်မှု (ventral striatum, SN / VTA နှင့် MTL activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 6) ။ hippocampal သင်ယူမှုနှင့် plasticity ၏အရေးပါသောအသှငျအပွငျ, နှောင်းပိုင်းအဆင့် LTP (ရေရှည်အလားအလာ) သော်လည်းမအစောပိုင်းအဆင့် LTP [Frey နှင့်မောရစ်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက် DA များအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်1998; et al Frey ။ 1990; Huang ကနှင့် Kandel 1995; ဂျေး 2003; မောရစ် 2006] ။ ဤသည် DA သည်ကြာရှည်မှတ်ဥာဏ်စုစည်းမှုအတွက်လိုအပ်သောအမြင်ကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းသည်ကြွက်များတွင်မကြာသေးမီကပြုမူသောအပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသည် [O'Carroll, et al ။ 2006] ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုတနေ့ putative dopaminergic ဒေသများနှင့် hippocampus အတွင်း encoding ကများနှင့် activation ပြီးနောက်ဆုလာဘ်မှတဆင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုဖေါ်ပြခြင်း၌ဤအမြင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ SN / VTA အတွင်း-ဆုခခြဲ့မဟုတ်ပစ္စည်းများ, ventral striatum နှင့် hippocampus နှင့် ventral striatum နှင့် hippocampus အတွင်း nonrewarded ပစ္စည်းများ vs. ဆုခခြံအကျွမ်းတဝင်များအတွက်ဆက်စပ်မှု vs. ဆုခခြဲ့တ္ထုတစ်ခုဆက်စပ်ကြည့်ပါ။ အဆိုပါ ventral striatum အဆိုပါ dopaminergic midbrain (SN / VTA) et al [Fields ၏မူလတန်း output ကိုဖွဲ့စည်းပုံကြောင်းပေးတော်မူ၏။ 2007] ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ hippocampal-SN / VTA မှတဆင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၏အကျိုးကို-related တိုးမြှင်စောငျ့ရှောကျဖို့စွမ်းရည်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုကန့်သတ်ထားပေမယ့်လည်းအကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုသက်ဆိုင်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တကယ်တော့သူက (ကုဒ်သွင်းနေစဉ်အတွင်း) အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှု၏အတန်းတို့တွင်အကျွမ်း၏ဒီဂရီအတော်လေး variable ကိုကြီးနှင့်သူ၏ encoding ကဆုလာဘ်ကနေအများဆုံးအကြိုးခံစားသူတွေကိုလှုံ့ဆော်မှုအနည်းဆုံးအကျွမ်းတဝင် (အတော်လေးအများဆုံးဝတ္ထု) သူတွေဖြစ်တယ်။ ကြောင်းကိုဖွယ်ရှိသည် ဒါကြောင့်တ္ထုများနှင့်အကျွမ်းတဝင်နှိုးဆွအတန်းများအတွက်ဆက်စပ်မှုအတူတူယန္တရားများအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်ယူဆကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုလည်း septum / fornix (မှာရှိတဲ့ဆုလာဘ်တစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိသင်္ဘောသဖန်း။ 4B), ခေတ္တယာယီအဆောက်အဦများ medial မှပရောဂျက်ရာ cholinergic အာရုံခံအထဲ၌တည်ဖွယ်ရှိသောဒေသ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ, (ထို Basal forebrain အတွက်), DA အာရုံခံဆင်တူ cholinergic အာရုံခံအသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်နဲ့လှုံ့ဆော်မှု Wilson ကနဲ့ Rolls [အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာသည့်အခါ habituate ကြောင်းပြသ1990b] ။ သို့သျောလညျးအကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်တာဝန်များကိုအတွက် Basal forebrain အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှု, Wilson ကနဲ့ Rolls [ဆုလာဘ်-ခန့်မှန်းထက်အသစ်အဆန်း status ကိုရောင်ပြန်ဟပ် 1990a] ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် (သင်္ဘောသဖန်း။ 4B) (Wilson ကနဲ့ Rolls များ၏လေ့လာရေးနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြ1990a) ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့အတိုင်းအတာသည်ဤ Active အမှန်တကယ် cholinergic အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်မှုပါဝင်မှမပြောနိုင်ပါဘူးပေမယ့်။
အတူတူယူကျနော်တို့ ventral striatum, SN / VTA, hippocampus နှင့် rhinal cortex ၏လှုပ်ရှားမှုဟာ hippocampus-SN / VTA ကွင်းဆက်နှင့်သဟဇာတဆုလာဘ်-related မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းမကြာသေးမီကလေ့လာတွေ့ရှိချက်ပုံတူပွား။ အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဒီကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းများ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများသို့အသစ်က key ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသညျ။ ventral striatum လှုပ်ရှားမှုလွတ်လပ်စွာအသစ်အဆန်း status ကို၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်သော်လည်းတစ်ဦးကို item ၏အသစ်အဆန်း status ကိုဆုလာဘ်ခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် hippocampus ဦးစားသည့်အသစ်အဆန်း status ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ (Orbital အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်) အဆိုပါ medial PFC အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်သက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးထုတ်ဖော်ပြောဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါင်းစည်းခဲ့ကြနှင့် hippocampus နှင့် ventral striatum နှင့်အတူချိတ်ဆက်ခံရဖို့လူသိများသည်ဘယ်မှာဆိုက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှာဖွေရေးဆုကြေးငွေသီအိုရီနှင့်အညီ [Kakade နှင့်ဒါယန်း,2002လှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်း] ဝတ္ထုဆုလာဘ်ဆက်စပ်အခြေအနေအဆိုပါ hippocampus အတွင်းတိုးမြှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးသော (အကြိုးမပါ) အကျွမ်းတဝင်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့ data တွေကိုရှာမှီးအတွက်ထောက်ခံမှုများအတွက် K. Herriot ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
EPI အချိန်စီးရီးအတွက် Andersson JL, Hutton ကို C, Ashburner J ကို, Turner R ကို, Friston K. မော်ဒယ်လင်းဂျီဩမေတြီပုံပျက်သော။ Neuroimage ။ 2001; 13: 903-919 ။ [PubMed]
Ashburner J ကို, Friston KJ ။ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးပြီး Nonlinear Spatial ပုံမှန်။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 1999; 7: 254-266 ။ [PubMed]
Berridge KC ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ over နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု - မက်လုံးများလွန်းခြင်းအတွက်ကိစ္စ။ psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 391-431 ။ [PubMed]
ဘရောင်းမဂ္ဂါဝပ်, Xiang JZ ။ အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်: ကြိုတင်ဖြစ်ပျက်မှုများ၏တရားသဖြင့်စီရင်၏အာရုံခံအလွှာဟာ။ prog Neurobiol ။ 1998; 55: 149-189 ။ [PubMed]
Bunzeck N ကို, လူ့ Substantia Nigra / VTA အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပစ္စည်းအသစ်အဆန်းများ Duzel အီး Absolute Coding ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51: 369-379 ။ [PubMed]
Bunzeck N ကို, Schutze H ကို, Stallforth S က, Kaufmann J ကို, Duzel S က, Heinz HJ, Duzel အီး Mesolimbic အဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက်အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့။ Cereb Cortex ။ 2007; 17: 2940-2948 ။ [PubMed]
Bunzeck N ကို, Doeller CF, Fuentemilla L ကို, Dolan RJ, Duzel အီးဆုကြေးလှုံ့ဆော်မှုမီလီစက္ကန် 85 မှလူသားတွေအတွက်အာရုံကြောအသစ်အဆန်းအချက်ပြမှုများကိုစတင်ခြင်း accelerates ။ Curr Biol ။ 2009; 19: 1294-1300 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bunzeck N ကဒါယန်း P ကို, Dolan RJ, ဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်း၏သပ္ပါယ်မှုကြီးလျှော့ချဘို့ Duzel အီးတစ်ဘုံယန္တရား။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2010; 31: 1380-1394 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Deichmann R ကို, Gottfried ဂျာ Hutton ကို C, Turner R. Optimized EPI အဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏ fMRI လေ့လာမှုများအဘို့။ Neuroimage ။ 2003; 19 (2 Pt 1): 430-441 ။ [PubMed]
Devenport ld, Devenport ဂျာ Holloway အက်ဖ်အေ။ ဆုလာဘ်-သွေးဆောင် stereotypy: အ hippocampus အားဖြင့် Modulation ။ သိပ္ပံ။ 1981; 212: 1288-1289 ။ [PubMed]
Dolan RJ, ဖလက်ချာကို PC ။ Episode မှတ်ဉာဏ် encoding ကအတွက် prefrontal နှင့် hippocampal function ကို Dissociating ။ သဘာဝ။ 1997; 388: 582-585 ။ [PubMed]
Duzel အီး, Bunzeck N ကို, Guitart-Masip M က, Wittmann B, Schott BH, Tobler PN ။ လူ့ dopaminergic midbrain ၏ functional ပုံရိပ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2009; 32: 321-328 ။ [PubMed]
Eckert T, Sailer M, Kaufmann J, Schrader C, Peschel T, Bodammer N, Heinze HJ, Schoenfeld MA ။ Idiopathic ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ စနစ်အမျိုးမျိုးကျုံ့ခြင်း၊ အဆင့်မြင့် supranuclear လက်ခြေသေမှုနှင့် magnetization transfer ပုံရိပ်အား သုံး၍ ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများကိုခွဲခြားခြင်း။ Neuroimage ။ 2004; 21: 229-235 ။ [PubMed]
Ferino F, Thierry AM, Glowinski J. ခန္ဓာဗေဒနှင့် electrophysiological အထောက်အထားများသည်အမ္မုန်၏ ဦး ချိုမှသည်ကြွက်များတွင် medial prefrontal cortex သို့တိုက်ရိုက်စီမံချက်အတွက်သက်သေအထောက်အထား။ Exp Brain Res ။ 1987; 65: 421-426 ။ [PubMed]
fields HL, Hjelmstad GO, Margolis eb, Nicola သည် SM ။ သင်ယူစာစားချင်စိတ်ကိုအပြုအမူအတွက် Ventral Tegmental ဧရိယာတွင် neuron နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောစစ်ကူ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2007; 30: 289-316 ။ [PubMed]
Frey ဦး, မောရစ် RG ။ Synaptic မှတ်သားခြင်း: hippocampal ရေရှည်အလားအလာများနှောင်းပိုင်းတွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အဂယက်ရိုက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1998; 21: 181-188 ။ [PubMed]
Friedman DP, Aggleton JP, Saunders RC ။ ယင်းနျူကလိယမှ hippocampal, amygdala နှင့် perirhinal စီမံကိန်း၏နှိုင်းယှဉ် accumbens: အမျောက်များဦးနှောက်ထဲမှာပေါင်းစပ် anterograde နှင့် retrograde သဲလွန်စလေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 2002; 450: 345-365 ။ [PubMed]
Friston KJ, ဖလက်ချာ P ကိုယောသပ်က, အိုကေတီဟုမ်းတစ်ဦးက, Rugg MD, Turner R. Event-related fMRI: characterizing differential ကိုတုံ့ပြန်မှု။ Neuroimage ။ 1998; 7: 30-40 ။ [PubMed]
Godden DR, Baddeley အေဒီ။ မြေယာနှင့်ရေအောက်တွင်နှစ်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် context-မှီခိုမှတ်ဉာဏ်။ စိတ်ပညာဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 1975; 66: 325-331 ။
goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Limbic နှင့် cortical သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2008; 31: 552-558 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပဲ့, G, Draganski B, Frackowiak R ကို, Ashburner J ကို, သံလိုက်လွှဲပြောင်း (MT) parameter သည်မြေပုံများအား အသုံးပြု. နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအဆောက်အဦများ၏ Weiskopf N. တိုးတက်ကောင်းမွန်သော segment ။ Neuroimage ။ 2009; 47: 194-198 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Holscher ကို C, ယာကုပ် W က, Mallot HA ။ ဆုလာဘ်ကြွက်များ၏ hippocampus အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု modulates ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2003; 142: 181-191 ။ [PubMed]
Hutton ကို C, ဘောက်တစ်ဦးယောသပ်က, အို Deichmann R ကို, fMRI အတွက် Ashburner J ကို, Turner R. Image ကိုပုံပျက်ဆုံးမခြင်း: တစ်ဦးကအရေအတွက်အကဲဖြတ်။ Neuroimage ။ 2002; 16: 217-240 ။ [PubMed]
Hutton ကို C, Deichmann R ကို, Turner R ကို, Andersson JL ။ 2004 ။ ဂျီဩမေတြီပုံပျက်နှင့် fMRI အတွက်ဦးခေါင်းရွေ့လျားမှုနှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန်များအတွက်ပေါင်းလိုက်သောဆုံးမခြင်း; ISMRM 12, ကျိုတို, ဂျပန်၏တရားစွဲဆိုမှု။
Ikemoto အက်စ် Dopamine ဆုလာဘ် circuitry: နှစ်ဦး projection စနစ်များ ventral midbrain ထံမှနျူကလိယမှ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေး။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2007; 56: 27-78 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Johnson က JD, Muftuler LT, Rugg MD ။ အကွိမျမြားစှာအထပ်ထပ်အဆက်မပြတ်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်စဉ်အတွင်း function နှင့်ခန္ဓာဗေဒ hippocampal လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားပုံစံများထုတ်ဖေါ်။ Hippocampus ။ 2008; 18: 975-980 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kakade S ကဒါယန်း P. Dopamine: General နှင့်ဆုကြေးငွေ။ အာရုံကြော Netw ။ 2002; 15: 549-559 ။ [PubMed]
အသစ်အဆန်းထောက်လှမ်းဖို့လူ့ hippocampal ဒေသ၏ Knight ဟာ R. ပံ့ပိုးပေးခြင်း။ သဘာဝ။ 1996; 383: 256-259 ။ [PubMed]
Knutson B, Cooper က JC ။ ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ Curr Opin Neurol ။ 2005; 18: 411-417 ။ [PubMed]
Krebs RM, Schott BH, Schutze H ကို, Duzel အီးအဆိုပါအသစ်အဆန်းတူးဖော်ရေးဆုကြေးငွေနှင့်၎င်း၏အာရုံကိုမော်ဂျူ။ Neuropsychologia ။ 2009; 47: 2272-2281 ။ [PubMed]
Lisman je, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ အဆိုပါ Hippocampal-VTA Loop: Long-Term မှတ်ဉာဏ်သို့ပြန်ကြားရေး၏ Entry ထိန်းချုပ်ခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 703-713 ။ [PubMed]
MM Mesulam ။ အာရုံခံစားမှုကနေသိမှတ်ခံစားမှုရန်။ ဦးနှောက်။ 1998; 121 (Pt 6): 1013-1052 ။ [PubMed]
မောရစ် RG ။ Synaptic plasticity, Synaptic မှတ်သားခြင်းနှင့် schemas များ၏အခန်းကဏ္ဍ: hippocampal function ကိုတစ် neurobiological သီအိုရီ၏ဒြပ်စင်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2006; 23: 2829-2846 ။ [PubMed]
ထို Y ကိုဒေါ် ND, ယောလ: D ဒါယန်း P. ဆေး dopamine: အခွင့်အလမ်းစရိတ်နှင့်တုန့်ပြန်သန်စွမ်း၏ထိန်းချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 507-520 ။ [PubMed]
O'Doherty JP, Deichmann R ကို, Critchley HD ကို Dolan RJ ။ အဓိကအရသာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 33: 815-826 ။ [PubMed]
Ploghaus တစ်ဦးက, Tracey ငါ Clare က S, Gati JS, Rawlins ဖြစ်မှု, Matthews ကဝန်ကြီးချုပ်။ နာကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်ယူခြင်း: ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များများအတွက်ခန့်မှန်းအမှားများ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2000; 97: 9281-9286 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Purves: D, Bonardi ကို C, အ hippocampus ၏လျှပ်တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ငုပ်လျှိုးနေတားစီး၏ခန်းမ G. အစွမ်းရည်မြှင့်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1995; 109: 366-370 ။ [PubMed]
Ranganath ကို C, ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များဖော်ထုတ်မယ်နှင့်သတိရဘို့ Rainer G. အနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2003; 4: 193-202 ။ [PubMed]
Rolls ET, Xiang JZ ။ ဆုချ-Spatial အဆိုပါမျောက် hippocampus အတွက်အမြင်ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်သင်ယူမှု။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 6167-6174 ။ [PubMed]
ရို DL, ဗန် Hoesen GW ။ Hippocampal efferents ဟာမျောက်တွေကိုအတွက်နှောက် cortex နဲ့ amygdala ၏ကျယ်ပြန့်ဒေသများရောက်ရှိဖို့။ သိပ္ပံ။ 1977; 198: 315-317 ။ [PubMed]
Selden ရော်ဘာ, Gitelman DR, Salamon-Murayama N ကို, Parrish တီဘီ, Mesulam MM ။ လူ့ဦးနှောက်၏နှောက် hemisphere အတွင်း cholinergic လမ်းကြောင်း၏လမ်းကြောင်း။ ဦးနှောက်။ 1998; 121 (Pt 12): 2249-2257 ။ [PubMed]
Smith က Y ကို, Kieval JZ ။ အဆိုပါ Basal ganglia အတွက် dopamine စနစ်၏ခန္ဓာဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2000; 23 (10 ပျော့ပျောင်း): S28-S33 ။ [PubMed]
Sokolov မာခ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဦးနှောက်အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်များကို; အဆိုပါ Oriental တုံ့ပြန်မှု။ Annu ဗြာ Physiol ။ 1963; 25: 545-580 ။ [PubMed]
Solomon PR၊ Vander Schaaf ER, Thompson RF, Weisz DJ Hippocampus နှင့်ယုန်၏ classical အေးစက် nictitating အမြှေးပါးတုံ့ပြန်မှု၏အေးစက်ခြေရာကောက်။ Behav Neurosci ။ 1986; 100: 729-744 ။ [PubMed]
ထူးဆန်းတဲ့ BA, ဖလက်ချာကို PC, Henson RN, Friston KJ, Dolan RJ ။ လူ့ hippocampus ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာခွဲခြား။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1999; 96: 4034-4039 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sutton RS, Barto AG က။ မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ခန့်မှန်း: သပ္ပါယ်ကွန်ရက်ခေတ်မီသီအိုရီဆီသို့။ Psychol ဗျာ 1981; 88: 135-170 ။ [PubMed]
Tabuchi ET, Mulder AB, Wiener SI ။ ရာထူးနှင့်လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားအတွက် hippocampal နှင့် accumbens အာရုံခံရိနာစွဲထပ်တူ၏အမူအကျင့်မော်ဂျူ။ Hippocampus ။ 2000; 10: 717-728 ။ [PubMed]
Thierry လေး, Gioanni Y ကို, Degenetais အီး, Glowinski ဂျေ Hippocampo-prefrontal cortex လမ်းကြောင်း: Anatomical နှင့် electrophysiological ဝိသေသလက္ခဏာများ။ Hippocampus ။ 2000; 10: 411-419 ။ [PubMed]
Tulving အီးမှတ်ဉာဏ်နှင့်သတိ။ ကနေဒါစိတ်ပညာ။ 1985; 26: 1-12 ။
Weiner ဗြဲအဆိုပါ "နှစ်ခုခေါင်းနှစ်လုံး" ငုပ်လျှိုးနေတားစီး schizophrenia များ၏မော်ဒယ်: အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေမော်ဒယ်နှင့်၎င်းတို့၏ဆေးကုသမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 169 (3-4): 257-297 ။ [PubMed]
Weiskopf N ကို, လူ့ဦးနှောက်၏ပဲ့ G. အ Multi-parameter သည်မြေပုံထက်နည်း 1 မိနစ် 20mm resolution ကိုအနည်းဆုံး။ ISMRM 16, တိုရွန်တို, ကနေဒါ: 2008 ။
Weiskopf N ကို, Hutton ကို C, ယောသပ်က, အိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်-သွေးဆောင် BOLD sensitivity ကိုဆုံးရှုံးမှုများလျှော့ချရေးတို့အတွက် Deichmann R. ပေးနိုင်သော EPI parameters များကို:3T နှင့် 1.5 တီ Neuroimage မှာတစ်ဦးတပြင်လုံးကို-ဦးနှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ 2006; 33: 493-504 ။ [PubMed]
Wilson ကအက်ဖ်အေ, Rolls ET ။ သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဟာမျောက် Basal forebrain အတွက်အားဖြည့်-related အာရုံခံများ၏တုံ့ပြန်မှုတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။ J ကို neuroscience ။ 1990a; 10: 1254-1267 ။ [PubMed]
Wilson ကအက်ဖ်အေ, Rolls ET ။ အဆိုပါ substantia innominata, Broca ၏ထောင့်ဖြတ်တီးဝိုင်းနှင့်မျောက် Basal forebrain ၏ periventricular ဒေသတွင်း၌အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု၏အသစ်အဆန်းများနှင့် familarity နှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံခံတုံ့ပြန်မှု။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 1990b; 80: 104-120 ။ [PubMed]
Wirth က S, Avsar အီး, chiu CC ကို, Sharma က V ကို, စမစ်, AC, ဘရောင်း, E, ဆူဇူကီး WA ။ မျောက် hippocampus အတွက်စမ်းသပ်မှုရလဒ်နှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူမှုအချက်ပြမှုများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 61: 930-940 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wittmann ဘီစီ, Schott BH, Guderian S က, Frey Ju, Heinz HJ, dopaminergic midbrain ၏ Duzel အီးဆုကြေး-ဆက်စပ် FMRI activation တိုးမြှင် hippocampus-မှီခိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 459-467 ။ [PubMed]
Wittmann ဘီစီ, Bunzeck N ကို, Dolan RJ, အသစ်အဆန်းတပ်သားသစ်ဆုလာဘ်စနစ်နှင့် hippocampus ၏ Duzel အီးရှိလာစာမျက်နှာမြှင့်တင်နေစဉ်။ Neuroimage ။ 2007; 38: 194-202 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wittmann ဘီစီဒေါ် ND, Seymour B, Dolan RJ ။ Striatal လှုပ်ရှားမှုလူသားတွေအတွက်အသစ်အဆန်း-based ရွေးချယ်မှုအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 58: 967-973 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Yamaguchi S, Hale LA, D'Esposito M, Knight RT ။ ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များမှလျင်မြန်စွာ prefrontal-hippocampal လေ့။ J ကို Neurosci ။ 2004; 24: 5356-5363 ။ [PubMed]